Zimbabwe bank chief: No return to local dollar
GMT 11:44 2013 Wednesday ,07 August
Zimbabwe\_'s central bank chief has ruled out an immediate return of the local currency after elections last week that extended President Robert Mugabe\_'s 33-year rule. \_"There are no plans whatsoever within and outside the bank for the immediate or near-term introduction of a new currency or return of the Zimbabwean currency by whatever name,\_" Gideon Gono said in a statement late on Tuesday. In 2009, the country dumped its hyper-inflation ravaged Zimbabwean dollar for the US dollar and other regional currencies. The country\_'s decade-long downturn marked by galloping inflation which at one point peaked at 231 million percent has since stabilised at 2.8 percent, according to latest figures. Gono\_'s statement followed rife speculation among depositors about the immediate reintroduction of the Zim dollar, after Mugabe\_'s re-election last week. He said Zimbabwe\_'s economic problems were not yet over and the country could not afford an immediate switch to the local currency. At the launch of his party\_'s election campaign, Mugabe said the return of the Zimbabwean dollar would be \_"cautious and gradual.\_" Zimbabwe\_'s battered economy stabilised when rivals Mugabe and Morgan Tsvangirai formed the unity government in 2009. While the economy is growing -- at five percent last year -- public finances remain in disarray, but most people still live in poverty,